Deepin Linux 20 Beta inowanikwa kurodha pasi | Linux Vakapindwa muropa
Yakadzika Linux 20 Beta Izvozvi yave kuwanikwa kurodha pasi pamwe neakawanda makuru makuru ekuvandudza, kusanganisira kunatsiridzwa kudesktop uye Linux Kernel 5.3.
Chinhu chekutanga chaunogona kucherechedza mushure mekuisa iyo nyowani beta ndeye yakavandudzwa mushandisi interface, nemakona akapoteredzwa mumawindows uye mitsva yekuratidzira mhedzisiro, iyo yekuwedzera mifananidzo ine mavara kugadzira "chiitiko chinoshamisa", Inovimbisa timu yekusimudzira.
Deepin Linux 20 beta inomhanya paDebian 10, saka inogamuchira zvekare mamwe ekuchengetedza uye kugadzirisa. Zvitsva zvinoshandiswa zvakare chikamu cheichi chiitiko, senge font muoni.
Iyo nyowani mushandisi interface
Mahwindo akapoteredzwa anopa iyo sisitimu nyowani, yazvino dhizaini iyo makambani mazhinji ari kufamba. Microsoft inonzi ichange ichiongorora mativi akakomberedzwa eiyo Windows 10 GUI, kunyangwe shanduko idzo dzichinyura zvishoma nezvishoma kuenda kuhurongwa. Deepin inotaura kuti iyo inogadziriswazve mushandisi interface inongova chikamu chechiitiko chitsva chevashandisi.
"Deepin 20 beta inouya neyakabatanidzwa dhizaini uye yakavandudzwa desktop desktop, ichiunza chiitiko chitsva chose chevashandisi. Kunze kwezvo, pasi pe desktop neKernel yakagadziridzwa ku Debian 10 uye Kernel 5.3. Debian 10 inogara ichigadziriswa uye yakagadzikana. Zvakanakisa, zvinounza maficha matsva evashandisi vedu. "
Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti Deepin 20 ichiri mune beta vhezheni, saka panogona kuve nezvinetso neruzivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Deepin Linux 20 Beta inowanikwa kurodha pasi